200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105 300-101 300-206 300-070 70-417 210-260 210-060 200-355 300-208 CISSP 300-135 210-065 300-209 70-243 70-480 CCA-500 2V0-621D 210-451 400-051 E05-001 1Z0-052 70-410 640-916 VMCE_V9 810-403 070-464 070-243 700-802 70-246 FCBA GPHR DEV-401 C2090-610 SY0-401 712-50 ADM-201 700-039 312-50 MA0-101 648-244 SK0-004 ASF 70-494 70-673 500-005 1Z0-060 C9560-503 640-875 N10-006 98-367 70-534 NS0-505 70-342 CHFP 070-410 640-878 1V0-603 1Z0-804 C8010-250 312-50V9 C2150-508 98-368 CLOUDF 70-411 70-461 220-901 70-488 070-341 PK0-003 E20-547 70-412 70-686 500-285 CISM 101-400 102-400 PDM_2002001060 JN0-100 642-883 CAP 070-347 Muxuu DF uga dhigan yahay hadalkii Michael Keating ee heshiiska Berbera? | Shabakada Warbaahinta Times
Muxuu DF uga dhigan yahay hadalkii Michael Keating ee heshiiska Berbera?
Apr 5, 2017 - jawaab
Muqdisho (Caasimada Online) – Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Danjire Micheal Keating ayaa wax laga waydiiyey arrimaha ku aadan heshiiska Saldhigga Berbera ee dhex maray Imaaraadka iyo Maamulka Somaliland, kaasoo muran badan uu ka dhashay kadib markii lagu tilmaamay inuu yahay heshiiskaas mid aan waafaqsaneyn sharciga Caalamiga ah.
“Waxaan filayaa arrintaani (Saldhigga Militari) ay u taalo xukuumadda Somaliland qaabkii ula macaamili lahayd, haddii ay jirto arrimo ay warbaahinta madaxa banaan iyo ururada rayidka mowducan ka qabaan ay muhiim tahay in la shaaciyo oo xukumadda Somaliland lagala hadlo” ayuu yiri.
“Waxaa muhiim ah oo cad sidii kor lagu qaadi lahaa kaabaayasha kala duwandhaqaaalaha sida shaqo abuurka iyo abuurista fursado dhaqaalaha ay helaan shacabka Somaliland. Laakinse, qaabka loo fulinayo ay noqoto inay cadahay iyado lagu dabaqayo nidaamka caalaamiga ee sharciga caalamiga ah (international law)”.
Haddaba marka la fiiriyo qaabka uu u dhacayo hadalka Ergeyga Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, wuxuu muujinayaa in dowladda Soomaaliya aysan shaqo ku laheyn arrinta ku aadan heshiiska Berbera gacanta loogu geliyey Imaaraadka si ay uga sameystaan saldhig Militari oo laga duqeeyo Xuutiyiinta Yeman.
Hadalka Keating ee ahaa inay Maamulka Somaliland ay u taal arrinta saldhigga Militari ee Berbera, iyadana wax laga waydiinayo wuxuu muujinayaa dhab ahaanshaha in dowladda Mareekanka ay markii hore wax ka ogeyd heshiiskaas, maadaama ay xulufo yihiin Mareekanka iyo Imaaraadka.
Dowladda Soomaaliya ayaa heshiiskaas ka hor imaaday, balse mowqifka Ergeyga Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa muujinayo shaki cusub oo ku aadan heshiiskaas, maadaama aysan uga hadlin sidii la filayey.
Dowladda Mareekanka ayaa la sheegay in qeyb ka aheyd dowladihii ay Imaaraadka Carabta kala tashatay heshiiska ay la gashay Maamulka Somaliland, waxayna dhawaan dowdladda Soomaaliya qaar kamid ah dowladaha caalamka u gudbisay dacwad ku aadan arrintaas, maadaama laga dhawaajiyey in heshiiskaas uu halis weyn ku yahay jiritaanka Soomaaliya.
Sababta ugu weyn ee halista keeni karto ayaa ah inay Xuutiyiinta Yeman kusoo biiraan kooxaha ka dagaalamo Soomaaliya, maadaama ay ku habjabeyn inay duqeyn doonaan Berbera haddii ay halkaas Imaaraadka Saldhig laga soo duqeeyo ka sameystaan